सुन्दैमा चकित पार्ने खबर : ‘७० वर्षीय वृद्धा गर्भवती’ | Rajmarga
सुन्दैमा चकित पार्ने खबर : ‘७० वर्षीय वृद्धा गर्भवती’
एजेन्सी । संसारमा पत्याउनै नसकिने कुराहरु पनि धेरै हुन्छन् । केही समयदेखि विश्वभरी नै भाइरल बनेको ७० बर्षिंया वृद्धाले आफू ६ महिनादेखि गर्भवती भएको दाबी गरकी छिन् ।
मेक्सिकोमा भएको उक्त घटनाले पछिल्लो समयमा विश्वकै चिकित्सकहरुलाई पनि अचम्मित पारेको छ । मारिया डि ला लुज नाम गरेकी उक्त वृद्धाले गर्भमा भएको बच्चा छोरी रहेको दाबी गर्दै अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
मारिया डि ला लुजले आफ्नो खुट्टा दुख्ने, निरन्तर बान्ता भइरहने, रिंगटा पनि लागिरहने लक्षण देखा परेपछि उनी क्लिनिकहरुमा गएकी थिइन् । चिकित्सकले १० वटा भन्दा बढी अल्ट्रासाउन्ड गराउँदा पनि अचम्मित नै परेको बताएका छन् ।
यदि मारियाले शिशुलाई जन्म दिए, उनले वृद्धावस्थामा आमा बन्ने संसारको पहिलो महिलाको हुनेछिन् । मारिया डेल कार्मेन बौसादा डि लाराभन्दा चार वर्ष जेठी हुने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम डेली मेलले जनाएको छ ।
यस अघि सन् २००६ मा बौसादा डि लाराले ६६ वर्ष ३ सय ५८ दिनमा जुम्ल्याहा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन् जसले उनलाई संसारकै वृद्ध आमा घोषणा गरिएको थियो ।
Previous post: गृहमन्त्रीले कारवाही गर्न दिएको निर्देशन प्रशासन कार्यालयबाट अवज्ञा
Next post: फेसबुकले किन नाङ्गो फोटो माग्न थाल्यो ? यस्तो रहेछ कारण
यी व्यक्तिका छन् ३ श्रीमती, श्रीमतीसँग रिस उठ्यो भने १ महिना शारीरिक सम्बन्ध बन्द
यस्तो बदला, दाँतको उपचार गराउन आएका पूर्वप्रेमिका सबै दाँत निकालीदिएपछि..
मध्यराति अचानक महिलाको शरीरमा केहि टाँसियो, अनि निकाल्न थल्यो विचित्रको आवाज
सामाजिक सञ्जालमा किन भाइरल भए यी तस्वीरहरु?
जब बलिउड नायिकालाई कपडाले धोका दियो (भिडियोसहित)
नेपालमा फेसबुक देखि पोर्न हब सम्म छ्यापछ्याप्ती काण्डै काण्ड !!